Ayatollah Ali Khamenei Iran oo Cambaareeyey wasiirka arrimaha dibedda dalkas. Kadib markii laga duubay Cod sir ah | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Ayatollah Ali Khamenei Iran oo Cambaareeyey wasiirka arrimaha dibedda dalkas. Kadib...
Ayatollah Ali Khamenei Iran oo Cambaareeyey wasiirka arrimaha dibedda dalkas. Kadib markii laga duubay Cod sir ah
Previous articleGuddoomiye Cabdi Xaashi oo xafiiskiisa ku qaabilay wefdi ka socda wasaarada arimaha dibada Dowladda Qatar.
Next articleWasiiru dowladaha Madaxtooyada Dowlad Goboleedka Jubbaland Xirsi Jaamac oo Codsi Xajiib ah u diray Ra iisal wasaraha Xil gaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble
Soomaalida Xaafada islii oo shalay si diiran u soo dhawaysay Danjire...
Wasaaradda kalluumeysiga xukuumadda Soomaaliya oo jawaab kulul siiyay Hay’adda Global Initiative...
Dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland oo ka hadashay qabsoomida doorashooyinka Golaha...